သင်ဟာ Free Fire ကိုအခုမှစကစားမယ့် Newbie တစ်ယောက်လား? Free Fire မှာ Noob တွေကိုရှာနည်း + Rank တက်စေမယ့် အကြံပြုချက်များ | Codashop Blog MM
Home Games Free Fire သင်ဟာ Free Fi...
သင်ဟာ Free Fire ကိုအခုမှစကစားမယ့် Newbie တစ်ယောက်လား? Free Fire မှာ Noob တွေကိုရှာနည်း + Rank တက်စေမယ့် အကြံပြုချက်များ
သင်ဒါကိုဖတ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ Free Fire မှာ beginner ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ အတိုချုံးရှင်းပြရရင်တော့ ဒီ Battle Royale Game မှာ သင်က အခြားသော Player (၄၉)ယောက်နဲ့ ကျွန်းတစ်ခုပေါ်မှာ အသေအကျေပစ်ခတ်ကြတဲ့ ဂိမ်းပါပဲ။ လက်နက်တွေနဲ့ ချပ်ဝတ်တန်ဆာတွေကို လိုက်လံစုဆောင်းယူလို့ရပြီး သင့် Character ရဲ့ အထူးစွမ်းရည်ကိုအသုံးပြုပြီး တိုက်ပွဲမှာ အသာစီးရအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအသက်ရှင်ကျန်တဲ့လူ (အသင်း) ကအနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နားထောင်ရတာ လွယ်တယ်မလား? တကယ်တမ်း အဲ့လောက်မရိုးရှင်းဘူးဆိုတာ လောင်းကြေးထပ်ရဲပါတယ်နော်!
လူတိုင်းကတော့ ဘယ်ဂိမ်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ် noob တစ်ယောက်အနေနဲ့ စကြရတာပါပဲ – – ကိစ္စမရှိပါဘူး! အဲဒါကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့က beginners တွေ အသစ်လေးတွေကို လမ်းမှန်ရောက်စေဖို့ ဒီ Free Fire လမ်းညွှန်လေးကို ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ စလိုက်ရအောင်!
Free Fire မှာ noob ကစားသမားတွေကို သူတို့ကစားတဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီး သိနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အပြုအမူတွေနဲ့ စွမ်းရည်တွေက သူတို့ရဲ့လက်ရှိ ကစားတဲ့ပုံစံနဲ့ ဂိမ်းကို ချဉ်းကပ်ပုံတွေက ကွဲထွက်နေပါလိမ့်မယ်။
လူသစ်လေးတွေက ကျွန်းပေါ်ကို ခြေစချတာနဲ့ နည်းနည်းကြောက်တတ်ပြီး ဇဝေဇဝါဖြစ်တတ်ကြတယ်။ ရန်သူကိုတွေ့လည်း မတိုက်ခိုက်ဘဲ ပြန်ပစ်ခံရပြီး သေမှာလည်းကြောက်ရသေးတယ်။ Pro ကစားသမားတွေကတော့ အမြန်စဉ်းစားပြီး ရန်သူကိုအနိုင်ယူဖို့ မာန်ပါပါနဲ့ကစားတတ်ကြပါတယ်။
Noobs တွေကတော့ ဝိုင်းကြီးပတ်ပတ် ဒူဝေဝေလို ပတ်ပြေးနေတတ်ပြီး ပစ်ပွဲဖြစ်နေတုန်းလည်း မဆင်မခြင် လျှောက်ပြေးတတ်ပါတယ်။ သူတို့က တိတ်ဆိတ်ခြင်းရဲ့အရေးပါမှုကို နားမလည်ကြဘဲနဲ့ မြင်ကွင်းထဲမှာရန်သူမရှိတာတောင် ပစ်နေတတ်ကြပါသေးတယ်။ အသစ်ကလေးတွေက ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအသုံးချပြီး အနိုင်ယူဖို့ ပါရမီပါမလာတတ်ကြပါဘူး။
တစ်ယောက်ယောက်က အရေးမပါတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို မရပ်မနား စုဆောင်းနေရင်တော့ သူက noob ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ထပ်ပြီးသိရှိနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်မျိုးပါပဲ။ သူ့အိတ်ထဲကို သူတွေ့သမျှပစ္စည်းတွေနဲ့ တရစပ် ဖြည့်လာပါလိမ့်မယ် အထူးသဖြင့် Ammos နဲ့ သုံးလို့လည်းမရတဲ့ ဆေးဝါးတွေ ပါပါလိမ့်မယ်။
Noobs တွေပစ်ခံရရင် ထိတ်လန့်တတ်ကြပါတယ်။ ချက်ချင်းကို အာရုံစူးစိုက်မှုတွေပျောက်ပြီး ကျည်ထိပြီး သေတာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက် တန်ပြန်ကာကွယ်ရေးလုပ်ဖို့ ( မှောက်လျက်နေဖို့) ကိုလည်းမေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ medkits ကိုသုံးပြီး အားပြန်ဖြည့်ဖို့လဲ မေ့တတ်ကြပါသေးတယ်။
သေနတ်တွေကို ရောပြီးအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာဆိုလည်း noobs တွေက သူတို့ရှာတွေ့တဲ့ ပထမဦးဆုံးသေနတ်တစ်လက်ကို တစ်ဂိမ်းလုံးတောက်လျှောက်သိမ်းပြီးဆော့တတ်ကြပါတယ်။ အနားမှာ airdrop တွေ့တာနဲ့ သူတို့မှာရှိတဲ့ အကောင်းစားသေနတ်နဲ့လည်းပစ်ချင်ပစ်တတ်ကြပါတယ်။ တပ်ရမယ့်ပစ္စည်းတွေအကြောင်းလည်း ဘာမှမသိကြပါဘူး။
အချိန်တော်တော်များများမှာ noobs တွေက ယာဉ်တွေကိုလဲ မသုံးတတ်ကြဘူး။ နေရာတွေတော်တော်ဝေးဝေးကိုလည်း ခြေကျင်ပဲပြေးနေတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ရန်သူ စနိုက်ပါတွေအတွက် လွယ်ကူတဲ့ပစ်မှတ်ဖြစ်လာပါတယ်။
Beginners တွေအတွက် Free Fire လမ်းညွှန်များ
ဆိုတော့ကာ သင်ဟာ ဂိမ်းထဲဝင်ပြီးသွားပြီ၊ တစ်ပွဲနှစ်ပွဲဆော့ပြီးသွားပြီ၊ ကျည်ဆံရာချီပြီး ပစ်ပြီးသွားပြီ။ ဒါပေမယ့် ဂိမ်းကို ကျင့်သားရဖို့တော့ ပြဿနာနည်းနည်းရှိနေပါလိမ့်မယ် – – ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ Beginner ကနေ Pro အဆင့်ရောက်ဖို့ အောက်မှာရှိတဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့ ပိုလွယ်လွယ်ကူကူ ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသာ သတိရထားပါ။
သင့်ရဲ့ playstyle နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ မှန်ကန်တဲ့ character ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဂိမ်းထဲမှာကစားတာကြာလာတဲ့အခါ တခြား characters တွေလည်း ရလာပါလိမ့်မယ်။ သူတို့အကြောင်းသိဖို့ အချိန်အများကြီး မကြာသင့်ပါဘူး၊ သူတို့ရဲ့ စပါယ်ရှယ်စွမ်းရည်တွေနဲ့ သူတို့ဟာ ဘယ်အသင်းသားတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး တိုက်ပွဲမှာ အသာစီးရနိုင်လဲဆိုတာတွေပေါ့။ Characters တွေထဲမှာ movement speed တိုးနိုင်တာ (Alok), gloo နံရံတွေကို ဖျက်ဆီးနိုင်တာ (Skyler), kills ရပြီးနောက် HP ပြန်ဖြည့်နိုင်တာ (Jota) စသဖြင့်အများကြီးထပ်ရှိပါသေးတယ်။
ဘယ်နေရာမှာ ဘေးကင်းကင်းနဲ့ ဆင်းရမယ်ဆိုတာကို သိရပါမယ်။
ဒီအချက်ဟာ များသောအားဖြင့် လျစ်လျူရှုခံရတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် beginner တွေပါ။ ကျွန်းရဲ့ ဘယ်နေရာတိတိကျကျမှာ ဆင်းရမယ်ဆိုတာ သိထားတာဟာ အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သေရေးရှင်ရေးဖြစ်တယ်။ Clocktower, Peak ဒါတင်မကဘဲ Pochinok လိုနေရာတွေက စကေးကြမ်းတဲ့ကစားသမားတွေရှိတဲ့ hot drops တွေဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်က ခုမှအသစ်ဆိုရင်တော့ စောစောစီးစီး မသေဖို့ ဒီနေရာတွေကို ရှောင်တာပိုကောင်းပါတယ်။ ခုထိဂိမ်းနဲ့စိမ်းနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ မြေပုံရဲ့ ထောင့်စွန်းတွေမှာ ဆင်းပြီးတော့ ကစားသူတွေများတဲ့နေရာကိုရှောင်ခြင်းဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ အသက်ရှင်ချိန်ကို တိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်။
တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာ ရန်သူကဘယ်အချိန် ကိုယ့်ရှေ့ကိုပေါ်လာပြီး သေနတ်နဲ့ချိန်ထားမယ်ဆိုတာ မသိနိုင်ပါဘူး။ သင့်ကို အဝေးကနေ စနိုက်ပါနဲ့ချိန်နေတာ ဖြစ်နိုင်သလို အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲ ကျည်ဆံများစွာနဲ့ စောင့်နေတာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပွဲပြီးတဲ့အချိန်အထိ ပထမဆုံးရတဲ့သေနတ်နဲ့ ပွဲမပြီးပါနဲ့။ လက်နက်နှစ်မျိုးသုံးပါ – – အဝေးပစ် တိုက်စစ်အတွက် Assault Rifle နဲ့ အနီးကပ် ရန်သူတွေကိုရှောင်ဖို့ဆို SMG တွေသုံးပါ။
ပစ္စည်းစုတယ်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ တွေ့ကရာပစ္စည်းတွေအကုန်သိမ်းထားပြီး ကိုယ့်ရဲ့ လွယ်အိတ်ထဲအကုန်ထည့်ထားရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အသုံးမဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေယူဖို့ အချိန်ကုန်မခံပါနဲ့။ အစောပိုင်းဂိမ်းမှာတော့ flashbangs တွေနဲ့ လက်ပစ်ဗုံးတွေ စုပါ။ ပြီးတော့ လူမြင်ကွင်းမှာ ပစ္စည်းစုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လွယ်ကူတဲ့ပစ်မှတ် မဖြစ်အောင်လည်း အရမ်းဂရုစိုက်ရပါမယ်။ အသုံးဝင်တဲ့ အကြံပြုချက်တစ်ခုကတော့ ပိုမိုလုံခြုံတဲ့ airdrop ကိုစုဆောင်းနေချိန်မှာ သင့်ဘေးမှာ gloo wall ကို အသုံးပြုဖို့ပါပဲ။
ကျည်ကာနဲ့ ဦးထုပ်မပါဘဲ တိုးဝင်တာပါ။ ရန်သူတွေကို အရမ်းတိုက်ခိုက်ပြီး ပစ်ချင်နေတဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုရှိတတ်တယ်ဆိုတာကို နားလည်ပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ အသုံးဝင်တဲ့ ကျည်ကာနဲ့ ဦးထုပ်ရှိမရှိသတိထားရပါမယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ သင့်ရဲ့ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ဖို့ အခွင့်အရေးတွေ တိုးပွားဖို့ Level3protective gear ဆောင်ထားဖို့ လိုပါတယ်။
စနိုက်ပါနဲ့ပစ်တာက တကယ် အရေးပါတဲ့စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ကို Free Fire မှာ သေချာပေါက် ကယ်တင်ပေးနိုင်မယ့် စွမ်းရည်တစ်ခုကတော့ စနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်ချိန်တော့ သင်ဟာ အနီးပစ်သေနတ်ကိုသုံးလို့မရနိုင်တဲ့အခါ စနိုက်ပါ ရိုင်ဖယ်တွေနဲ့အဝေးကပစ်တဲ့ ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစနိုက်ပါစွမ်းရည်တွေကို အဓိက ပိုပြီးငြိမ်တဲ့လက်နက်သုံးဖို့လိုတဲ့အခါမှာလည်း အထောက်အကူဖြစ်အောင် သင့်ရဲ့ပစ်မှတ်အတွက်ပါ အချိန်အဆ​ကောင်းအောင် လေ့လာကျွမ်းဝင်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ စနိုက်ပါမှာ တပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့လည်း တွဲပြီး လေ့ကျင့်ဖို့လိုပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ controls တွေကို ချိန်ပါ။ တချို့ကစားသူတွေဟာ control ကောင်းစွာလုပ်နိုင်ဖို့နဲ့ အခြားသော အချက်တွေကို settings ရွေးချယ်လို့ရတယ်ဆိုတာကို မေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ သင်ဟာ လက်မတည့်တဲ့သူလား? ဒါဆိုရင်တော့ Default Aim Precision ကို သုံးထားရင် ပိုပြတ်သားတဲ့ ပစ်ချက်တွေရအောင် ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
Previous articleFree Fire Rank Mode မှာသုံးဖို့အကောင်းဆုံးဇာတ်ကောင်များ
Next articleBlitz ဖက်ကိုပြန်လှည့်ကြမယ်: Wild Rift Blitzcrank အကြောင်းအသေးစိတ်လမ်းညွှန်